Ndingaite Sei Kuti Ndive nePinterest Pasina Kurodha pasi? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 501
Vanhu vazhinji vanotenda kuti Pinterest ipuratifomu yakaoma kushandisa uko pasina mukana wekuve mumwe weiyo vanhu vazhinji vanoonekwa pachikuva. Nekudaro, mukati meInternet chikamu, nzira dzakasiyana dzinogona kuitwa pasina kumisidzana nekuchengetedza izvo zvishandiso.
Zvisinei, nhasi kune zvakawanda zvingasarudzwa zvekuona kuti mamwe maitiro angashandiswa sei pasina chikonzero chekuvhura imwe shanduro panzvimbo ino. Izvi pasina kupokana, zororo kune vadikani venyika yemagetsi uye zvakare kune avo vanoda kuwana zvirinani zvinhu zvinochengeta zvese zvinokuvadza maturusi kure.
Saka pazasi iwe unogona kuona sei kuve nePinterest pasina kurodha pasi application, pamwe nekunakidzwa chikuva pasina dambudziko. Zvese izvi nekuda kwekugara uchiedza kwevashandi mune yemagetsi nyika.
Zvinoita here kuti uve nePinterest pasina kurodha pasi?
Kuti upindure uyu mubvunzo, haufanire kugara pamusoro penyaya iyi zvakanyanya nekuti zvinokwanisika kugara uchishandisa Pinterest mukati mepuratifomu pasina kurodha pasi application. Kutenda kune aya marudzi ezvinhu vashandisi havafanirwe kushandisa yakawanda nguva kubvisa zvimwe zvinhu kuti zviite nzvimbo.
Uye zvakare, kune zvakare mukana wese wekuti chikuva chinoshanda zvakakwana pasina chero muganho. Tichifunga zvese izvi, isu tinokuratidza pazasi kuti sei tora mukana wepuratifomu yePinterest pasina kudiwa kwekutora kunyorera pane mudziyo wemagetsi.
Ko Pinterest inotora yakawanda nzvimbo here?
Iyo peji yePinterest haitore nzvimbo yakawanda, chaizvo izvo zvinogona kukonzera kumberi kwekushandisa kwekushandisa ndiwo mapini akachengetedzwa mukati mepuratifomu. Tichifunga izvi, zano rakanaka nderekuchengeta mafaera ari SD kadhi kudzivirira chero matambudziko.
Matanho ekutora Pinterest pasina kurodha pasi
Zvino, hazvitore basa rakawanda kuti uwane rubatsiro rwekushandisa Pinterest pasi pechirevo chekusawana kuzara kweiyo in-app chengetedzo. Tichifunga izvi, isu tinokuratidza iwo matanho pazasi kuti iwe udzidze zvirinani uye uwane mukana wekuzvipa simba iwe nepuratifomu.
Pinda iyo Pinterest chikuva
Kunyangwe iwe kana usina kana kunyoreswa, rimwe rematanho ekutevera kugadzira email pamwe chete nephasiwedi kuti ugone kuisa chishandiso. Zvinogonekawo batanidza iyo data kuGoogle kana Facebook maakaunzi.
Paunenge iwe waisa iyo chaiyo data, iwe unowana iro peji redirect kuti uenderere nezviitwa mukati maro.
Sarudza yako affinities
Hapana chinhu chinonaka mukati mePinterest kupfuura kugona kusarudza zvese zvaunoda kuona, uye pakutanga peji rinosimudzira aya marudzi emabasa. Saka iwe unongofanirwa kutsvaga izvo zvaunofarira nezvazvo wozvishandisa kune mukana wako.
Pini Pinterest pafoni yako
Nhanho yekupedzisira, mushure mekugadzirisa chishandiso chose, kuve nemukana wekutsvaga sarudzo dzekugadzirisa: "Pinda kune peji guru." Mushure meizvozvo, iwe unogona kuve unowanikwa zvakakwana kune iyo peji chero nguva yezuva.
1 Zvinoita here kuti uve nePinterest pasina kurodha pasi?
1.1 Ko Pinterest inotora yakawanda nzvimbo here?
2 Matanho ekutora Pinterest pasina kurodha pasi
2.1 Pinda iyo Pinterest chikuva
2.2 Sarudza yako affinities
2.3 Pini Pinterest pafoni yako